Uketshezi ahlabayo (kokupholisayo): ngezigaba, isicelo
inqubo ngezinsimbi inikeze ephathelene ne-friction eqinile ukuthi kwenzeka phakathi workpiece futhi ithuluzi. Lokhu kubonakala ikakhulukazi lapho turning futhi Milling isebenza, uma ithuluzi lishisa kakhulu, extrusion abandayo, ngesivinini rocker kokwehla. ngomshikisho Olukhulu kunomthelela bafake kwanoma ithuluzi, the ukusonteka plastic workpiece, ushintsho izakhiwo zensimbi ngenxa okweqile. Ukuze kuncishiswe amandla ngomshikisho kudinga osezingeni uketshezi ekhethekile (kokupholisayo) kanye liyancipha lokushisa.
Imingcele yokuhlela ngezigaba coolants
Jikelele ngezigaba coolants eyenziwa nemingcele eziningana:
Ekhuluma ngomsuka yezingxenye. Ikhishwa uwoyela Isibandisi, okuncike petroleum amafutha, isilwane noma nemifino amafutha.
Ngu indlela ukuxhumanisa. Emulsol - umkhiqizo osuphelile nge eside ekuphileni eshalofini noma emulsion lobuchwepheshe, uzilungiselele ngokushesha ngaphambi ukusetshenziswa CONCENTRATE ngokuvumelana GOST.
On nemingcele ngokomzimba futhi mechanical - viscosity, inombolo acid, flash iphuzu. Isici yokugcina kubangela isicelo wamafutha kokupholisayo ngoba wokushaya ashisayo.
Ngokusho isicelo ensimini. Uveza izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba coolants izimo yokusebenza ezahlukene isicelo. Zokwenziwa ahlabayo uketshezi for plastic ukusonteka imisebenzi, Isibandisi ngoba lathes noma imishini yokugaya.
I zokwenziwa amanzi kokupholisayo encibilikayo jikelele EFELE CF-621 njengoba CONCENTRATE senzelwe machining cast ziboshwe ngozankosi, zase lezinsimbi, kuhlanganise engagqwali and ingxubevange, titanium, aluminium futhi Alloys zethusi. Lokhu kokupholisayo ukukhiqizwa Russian ine umbala inhlaka ezimnandi caramel iphunga. It ayiqukethe formaldehyde, chlorine ne ama yesibili, ephephile ke abantu. Made of zokwenziwa izingxenye ne kwalokho (15%) amaminerali uwoyela Ukwakheka, lokhu emulsion has a eziphansi, isici imikhiqizo yezimbiwa. Biostability nokusebenza EFELE CF-621 ukuvumela machining izinsimbi isixazululo incane uma kuqhathaniswa nezinye lokuhlala kokupholisayo.
Ukwahlukanisa kokupholisayo Ukwakheka
On indlela yokwakheka kokupholisayo ukuhlukanisa lezi zinhlobo ezilandelayo:
Oil - ukwakhiwa yezingxenye okuyizinto immiscible ngamanzi. Base emulsion namafutha kusendaweni upharafini, amaminerali noma petroleum amafutha (60-95%). Ukuze ngcono ukusebenza anti-ukuguga, friction, ukugqwala lichaza ekwakheni zihlanganisa izithasiselo ehlukahlukene kanye inhibitor. Amafutha emulsion ifa esihle yezihlanganisi izakhiwo. Isetshenziselwa izinsimbi ezithambile ngesikhathi elula yokusebenza izindlela.
Mineral - base wenza uwoyela ngu hydrogenation okhanda amanye amathuba. Ukuze aphumelele ngokwengeziwe izithasiselo kuhlanganisiwe kusuka amafutha, chlorine, isibabule, phosphorus compounds. Lezi izingoma asetshenziswa izinhlobo ezinjalo metal, njenge: steel ukusika, aluminium, zethusi, Ukuchusha, Milling umsebenzi elixutshiwe lezinsimbi.
Amanzi miscible - i isixazululo aqueous esekelwe uwoyela amaminerali. Lezi izingoma babe Ukupholisa kakhulu izakhiwo kanye ubuthi ongaphakeme, kodwa ongaphakeme yezihlanganisi ukusebenza. Ububanzi - ukukhanya kanye nesibopho naphakathi turning ithusi kanye nethusi eliningi elingenakulinganiswa, Milling futhi imishini yazo zonke izinhlobo izinsimbi non-ayoni, ukugaya nokuhlanganisa isibhakela steel.
Zokwenziwa futhi semisynthetic - ingxube amanzi, surfactants, amanzi polymers encibilikayo, anti-yesivini kanye izithasiselo elwa namagciwane, ukugqwala inhibitor. Ukuze kwandiswe lubricity e zokwenziwa izingoma nazo iqondiswa izithasiselo antiwear.
Emulsions - aqanjwe lokuhlala eliphezulu izinhlayiya bahlakazeka. Nciphisa izinga zokukhandleka amathuluzi kanye nemishini cishe yonke imisebenzi ngensimbi.
Sakhiwo mshini wezenzo we kokupholisayo
Ukusetshenziswa kabanzi coolants ekucubungululeni metal izinqubo ngenxa ukwehlukana ephumelelayo evele bezihlikihla ka workpiece kanye nethuluzi kanye nokunciphisa izinga lokushisa yabo. I kokupholisayo ephumelela kunazo kungafaka zingxenye ezilandelayo ukubunjwa yayo:
Ngesisekelo amafutha zokwenziwa noma ezilwane.
Izithasiselo ukwandisa bafake kokukhuhlana futhi kakhulu ingcindezi ukusebenza.
Izingxenye, ekuvimbeleni delamination Ukwakheka ngesikhatsi isitoreji.
Izithasiselo ukuvimbela ukugqwala nasekubhujisweni.
Izingxenye, ekunciphiseni yesivini futhi ogelezayo nokumanzisa ezishelelayo e metal.
Ukusebenza uketshezi zisetshenziselwa gcoba futhi kuphole endaweni yokusebenza e-metal. Izakhiwo kokupholisayo bavunyelwe ukunciphisa izinkinga zone ukwelashwa, ngaleyo ndlela kuncishiswe bafake ithuluzi, okwandisa izinga umkhiqizo ngokuthuthukisa ukushuba inqubo kanye, ngenxa yalokho, isivuno jikelele.
Ngenxa indawo yezihlanganisi yabo izakhiwo ezinhle kokupholisayo kunciphisa amandla kokukhuhlana phakathi komhlaba workpiece nokusikwa emaphethelweni ithuluzi, ukungqubuzana Imi ungqimba metal. Ezinye igrisi lobuchwepheshe ube nezakhi ezithile zamakhemikhali ekhuthaza ukwehla hhayi kuphela amandla kokukhuhlana, kodwa futhi ukuzilimaza amandla. Iningi kokupholisayo - surfactants nge adsorption okusezingeni eliphezulu izakhiwo. Bayakwazi akha ifilimu ezinzile phezu sensimbi, okuyinto kakhulu kunciphisa ukuxabana. Ezinye izithasiselo ekhethekile surfactant sigqoke metal "wedging" isinyathelo. molecule side izithasiselo ezifana awela microcracks e ebusweni eyinsimbi njengesivalo nhlonhlo, kanjalo buthaka ubuhlobo obuphakathi kwabo izinhlayiya material. Ngakho, Isibandisi "kusiza" ithuluzi zokusebenza ukusika ungqimba kusukela metal isizinda.
Okuvame kakhulu kokupholisayo izingoma ngoba umshini amathuluzi
Ukusebenza lathes kanye imishini yokugaya ekhiqizwa uketshezi elandelayo:
Emulsoles esekelwe amaminerali ne-petroleum amafutha.
Emulsifiers nge zokwenziwa fatty acid.
Ukuvula kanye nomsebenzi wokugaya, ukuhlinzeka ngesivinini ukucutshungulwa engagqwali and ingxubevange lezinsimbi, ekhiqizwa ngokuhambisana GOST 38.01445-88. Ngenxa yalezi zinjongo, inqobo izingoma zokwenziwa okuncike tallow uwoyela vysokoatomnye alcohols triethanolamine.
Sulfofrezoly - kakhulu nahlanza uwoyela ngxube compounds sulphur-aqukethe. Musa zinamanzi, alkalis, acid. kokupholisayo okunjalo yemishini ukunciphisa ngempumelelo friction, musa ingadala ukugqwala.
Isicelo kokupholisayo ekwelapheni ingcindezi metal
Le ndlela lihlotshaniswa metal eqondene abalulekile amandla futhi isihlobo ngokuhambisa phakathi workpiece futhi ithuluzi. Isibandisi elisetshenziswa izinqubo ezinjalo kumele babe viscosity siphezulu. Izici sici izingoma, ngensimbi ingcindezi yilezi:
Ukumelana ukwa nokuhlukaniswa at kwezimo okusezingeni eliphezulu lokushisa.
Sebenzisa vodnografitovye tonkocheshuychatogo aqanjwe ukufakwa graphite esekelwe ukumiswa uwoyela.
Izici isicelo eziwuketshezi ukusika
Ukuze isebenze kahle ngaphezulu kokupholisayo kufanele ucabangele izimiso ezimbalwa ezilula.
Ubuncane liquid ukugeleza, kungakhathaliseki kuba aqueous noma emulsion - 10-15 l / imiz.
Kubalulekile ukuthi ukugeleza kokupholisayo ungaphakathi emkhakheni wezemfundo lemali ukushisa. Lapho turning - yisici lapho chips ehlukanisiwe workpiece.
I supply kokupholisayo kufanele kwenziwe ngokushesha. Lapho kokupholisayo emva kwesikhashana umsiki kushisa kakhulu uzobe iqeda, okuphumela ekwakhiweni ukuqhekeka kuwo.
Isibandisi akuyona isicelo uma turning metal ziyaqothuka (nangethusi nensimbi, njll). Lapho ukuvula izinto ezinjalo yakha chips ezincane, okuyinto ihlangana ne Isibandisi, kungacinanisa umshini usebenza amayunithi (ukuthutha caliper, umhlahlandlela uzimele), okuholela bafake ngaphambi kwesikhathi futhi ukwehluleka kulezi zingxenye.
Ukukhiqizwa futhi isitoreji ukusika uketshezi
Ngaphezu isitoreji eside ezaqanjwa siphelile, ugxilisa, futhi izingxenye ekhiqizwa ukulungiswa uketshezi, ezovumelana nezimo we ibhizinisi elithile. Isibandisi, Isibandisi, intengo zazo, luncike ukwakheka elihambisana uhlobo oluthile umsebenzi ezimakethe zanamuhla yaqaphela for 70-160 ruble / ilitha aqanjwe ngomumo eyenziwe abakhiqizi yasekhaya futhi ruble 105-290 / ilitha ukukhiqizwa angaphandle. Inani isilinganiso CONCENTRATE kuyinto 240 r / ilitha. Ngaphambi kokufaka isicelo ketshezi ngokusebenzisa le nqubo elandelayo:
Elishukumisayo eyayenziwa ngesikhathi ezifakiwe ku ukwakheka kanye isitembu okushisa (60-110 0 C).
Ukuhlaziywa sokuqanjwa ngokuhambisana GOST.
I izingoma ukulungele zigcinwa izigubhu ezikhethekile, okuvumela ukuba afeze Ukushisa gqwa elishukumisayo.
Ekulungiseleleni emulsion, ukwethulwa izithasiselo, owenziwa kwi emulsification mncane vibratory.
Refilling okuqhubekayo yokudla kulandzelana nekuhlunga tinsita.
Iyasebenza le izingoma kuthiwa kungangcoli. Ukuhlinzekwa kwezinsiza kokupholisayo uhlanzekile uhlelo metal izinsalela. imikhiqizo Ukusingathwa ezingeke ngempumelelo bahlanza ukuze kuyolahlwa.
"Tulip" (ACS). Self ezinezinjini 240-mm nosimende 2S4 "Tulip"
Apple marshmallow: zokupheka
Indlela ukukhetha ummese ekhishini?
Recipe pancake caviar - isidlo kweqiniso Russian etafuleni lakho
Ungashintsha kanjani isivinini ngebhayisikili?